लन्च भयो स्प्लिट सिट सहितको सबैभन्दा सस्तो बजाज पल्सर १२५ !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Auto News/लन्च भयो स्प्लिट सिट सहितको सबैभन्दा सस्तो बजाज पल्सर १२५ !!
बजाज अटोले सबैभन्दा सस्तो पल्सर १२५ नयाँ स्प्लिट सिट भेरिएन्ट लन्च गरेको छ । सो बाइकको मूल्य ७९ हजार ०९१ भारु तोकिएको छ । सो बाइकको फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक स्ट्यान्डर्ड समावेश गरेको छ । सिंगल सिट भएको पल्सर १२५ को मूल्य डिस्क ब्रेक भेरिएन्टको भन्दा ३ हजार ५९७ र ड्रम ब्रे`क भेरिएन्टको भन्दा ८ हजार ०९६ भारु महँगो रहेको छ ।
बजाज पल्सर १२५ मा नयाँ स्प्लिट सिट, स्प्लि`ट ग्र्याब रेल र स्पोर्टी बेली प्यान समावेश गरिएको छ । सो बाइक ३ रङ ब्ल्याक रेड, ब्ल्याक सिल्भर र मेट ब्ल्याकको साथमा नियोन ग्रीनमा उपलब्ध रहेको छ ।
नयाँ पल्सर १२५ स्प्लिट सिट बाइक ट्वीन पायलट ल्या`म्पको साथमा वुल्फ आई हेडल्याम्प क्लस्टर र इन्फिनिटी ट्वीन स्ट्रिप एलईडी टेलल्याम्पको साथमा उपलब्ध रहेको छ । यसको फ्युल ट्यांक र रियर काउलमा ३डी लोगो समावेश गरेको छ । बाइकमा क्लिप अन ह्या`न्डलबार रहेको छ । अलोय ह्वीलमा बाइकको रङका आधारमा नियोन हाइलाइट समावेश गरेको छ ।
खुशीको खबर, अब मासिक १३ हजारमै कार चढ्न पाइने !!